ပဲခူး(အနောက်ပိုင်း) – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပြည်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ အမျိုးသမီးရေးရာညီလာခံအကြိုညှိနှိုင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပ
၁၄. ၁၀. ၂၀၁၈​နေ့ နံနက်​ ၉နာရီအချိန်​ ပဲခူးတိုင်း​ဒသကြီးအ​နာက်ပိုင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးတွင် ပြည်​မြို့နယ်​ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ အမျိုးသမီးညီလာခံအကြိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအား ကျင်းပခဲ့ရာ အခမ်းအနားတက်​​ရောက်​လာ​သော အမျိုးသမီးကိုယ်​စားလှယ်​များအား ပြည်မြို့နယ်​​အမျိုးသမီး​ရေးရာတာဝန်​ခံမှ ပန်းကုံးစွပ်​ကြိုဆိုပြီး အခမ်းအနားသို့တိုင်းပါတီအတွင်း​ရေးမှူးဦး​ကျော်​​ကျော်​လင်းနှင့်​တိုင်းပါတီ​ကော်​မတီဝင်​များ၊ ပြည်​ခရိုင်​ပါတီဥက္ကဌနှင့်​ ​ခရိုင်​​ကော်​မတီဝင်​များ၊ပြည်​မြို့နယ်​အတွင်း​ရေးမှူးနှင့်​မြို့နယ်​​ကော်​မတီဝင်​များ၊ ရပ်​​ကျေးဥက္ကဌများ၊NGO အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်​ အမျိုးသမီးကိုယ်​စားလှယ်​များ တက်​​ရောက်​ခဲ့ပါသည်​။အဆိုပါအခမ်းအနားကို အပိုင်း ၃ ပိုင်းဖြင့်​ကျင်းပခဲ့ပြီးတိုးင်းအမျိုးသမီး​ရးရာတာဝန်ခံ​ဒ်ါထားထားနုက ညီလာခံကျင်းပရခြင်းအကြောင်းအား ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ခရိုင်ပါတီဥက္ကဌဦး​အာင်​ဇာ်​ဌးကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊မြို့နယ်အတွင်း​ရးမှူး ဒေါ်သင်းသင်း​ဆွေက အမှာစကား​ပြပြာကြားခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီးရေးရာညီလာခံအား ကြိုဆိုသည့်အနေဖြင့် ဇီးကုန်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အမျိုးသမီးရေးရာအကြိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲပြုလုပ်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ကြီးမှူးပြီးကျင်းပပြုလုပ်မည့် အမျိုးသမီးရေးရာညီလာခံအား ကြိုဆိုသည့်အနေဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ ဇီးကုန်းမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ အမျိုးသမီးရေးရာညီလာခံအကြို နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ အခမ်းအနားအား ယနေ့ နံနက် (၀၉၃၀)နာရီခန့်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အကျိုးစီးပွား၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာများ၊ တရားဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအား တက်ရောက်လာသူများမှ ဆွေးနွေးကာ စာတမ်းပြု
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အမျိုးသမီးရေးရာညီလာခံအား ကြိုဆိုသည့်အနေဖြင့် သဲကုန်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ အမျိုးသမီးရေးရာအကြိုညီလာခံအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း)၊ပြည်ခရိုင်၊သဲကုန်းမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဗဟိုအမျိုးသမီးရေးရာညီလာခံအား ကြိုဆိုသည့်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးရေးရာအကြိုညီလာခံအားယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နိုင်ငံတော်သီချင်းသီဆိုပြီး အခမ်းအနားအားစတင်ဖွင့်လှစ်ကာ အမျိုးသမီးတို့ဘ၀တိုးတက်ရေး၊ အမျိုးသမီးတို့၏ဘ၀လုံခြုံရေး၊ အမျိုးသမီးတို့အတွက်ဘ၀မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာ ဘယ်အချိန်ပဲရောက်ရောက် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ကို ရှေ့တန်းကရပ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပါတီအမျိုးသားရေးကိုသစ္စာမဖောက်ဟု ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ပြောကြား
ပဲခူး သြဂုတ် ၂ဝ
ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တွဲဖက်တာဝန်ခံဦးလှသိန်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပါတီအတွင်းရေးမှူး ဦးညီညီမြင့်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးကော်မတီဝင်များ၊ ခရိုင်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်စိုးနှင့် ခရိုင်ကော်မတီဝင်များ၊ ကဝမြို့နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်နှင့် မြို့နယ်ကော်မတီများလိုက်ပါလျက် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ကဝမြို့နယ်ရှိ ရေဘေးသင့်ဒေသများဖြစ်သော ငှက်ကျော်၊ ကံလှ၊ ကမ်းပြို၊ စာဖြူစုကျေးရွာများသို့သွားရောက်၍ ရေဘေးသင့်အိမ်ခြေ ၁၇၆ လုံးတွင်နေထိုင်ကြသော ပြည်သူများထံသို့ ဆန်နှင့်ဆီများ သွားရောက်လှူဒါန်း ကြသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း)၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ ဇီးကုန်းမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မြို့နယ်၊ရပ်/ကျေး လစဉ်ပုံမှန်တွေ့ဆုံအစည်းအဝေးပွဲကို ယနေ့ ၁၀.၅.၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးသို့ တိုင်းပါတီကော်မတီဝင် ၊ ခရိုင်ပါတီကော်မတီဝင်၊ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်များ ၊ ရပ်/ကျေးပါတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များ၊ ပါတီ၏ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ပဲခူး (အနောက်) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ နိုင်ငံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (ဆင့်ပွား) သင်တန်းဖွင့်